Global Voices teny Malagasy » Fa naninona i Shina no nanaisotra an-tserasera ny filma propagandiny? Notondroin’ny mpiserasera ny fanasaziana ara-teknôlôjian’i Etazonia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Avrily 2018 5:26 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsinanana, Etazonia, Shina, Fitsipika, Indostria, Mediam-bahoaka, Sivana
Amazing China voalahatra 1,1 amin'ny 10 ao amin'ny IMDb. Pikantsary.
Tsy hita an-tserasera tampoka ny Amazing China , filma fanadihadiana iray mampiseho ny zava-bitan'i Shina eo amin'ny sehatry ny siansa, teknolojia ary ny fampihenana ny fahantrana nandritra ny fitarihan'i Xi Jinping.
Tamin'ny taratasy iray nalefa ho an'ireo mpandraharahan'ny sehatra fampitam-baovao marolafy tamin'ny 19 avrily ny mpampiely ilay filma, China film Co. Ltd, no nanoratra hoe:
Mankasitraka ny fanohanan'ny orinasanareo amin'ny fanajana ny fizakamanana (copyright) izahay. Mba hamelomana ny tontolo mirindra an-tserasera, dia mamoaka filazana momba ny fitsinjarana ny “Amazing China”  izahay:
Nandray naoty avy amin'ny mpitarika ny departemantan'ny propagandy manome toromarika ny sehatra fivarotana video ara-barotra an-tserasera rehetra izahay hanaisotra [ny filma] mandra-pisian'ny naoty maraka indray. Miangavy mba araho amin'ny fomba matotra ny toromarika ary miangavy mba ekeo ny fialan-tsininay noho ny fanelingelenana naterany.
Navoaka sy naseho tamin'ny 2 marsa 2018 ny filma fanadihadiana, izay mifototra amin'ireo andian-tatitra misongadina notontosain'ny China Central Television (CCTV).
Koa satria moa filma propagandy lehibe ny “Amazing China” (Shina mahagaga), dia nahetsika hijery ilay fanadihadiana avokoa ny ankamaroan'ny sampan-draharaha, ankolafy mpikambana ary orinasa. Talohan'ny 14 Avrily, efa nahazo tokotokony ho RMB 465 tapitrisa yuan [tokotokony ho 105 tapitrisa dôlara amerikana] ny lahatsary ka mametraka azy ho nahazo ny zavabita vaovao tsara indrindra amin'ny vola azo nijerena filma fanadihadiana ao Shina. Eto ambany ny sombiny fampiroboroboana ilay filma.
Tsy nisy ny fanazavana ofisialy mahatonga ilay filma ho mety hisy fiantraikany (ratsy) amin'ny tontolo an-tserasera “mirindra” any Shina. Nieritreritra  ny sasany fa nesorina ilay filma mba hampitomboana ny fotoana ijerena ny filma any amin'ny teathra.
Na izany aza, namoaka ny filazana fanesorana ny mpisera Twitter “Fanehoan-kevitra vanim-potoana efatra” ary nanombana fa nesorina ny filma ho setrin'ny fanasaziana vaovao ataon'i Etazonia amin'ny ZTE, orinasa shinoa fanamboarana rindrambaingam-pifandraisandavitra:
Nilaza ny “Amazing China” fa nahomby tamin'ny fampivelarana ireo mpampita (herinaratra) vongam-bainga ary nanao fanandramana tamin'ny karibônina avolenta. Na i Etazonia aza tsy mbola mahafehy tenolojia avo lenta toy izany. Ankehitriny mipoaka ny raharaha ZTE, tsy maintsy nesorina tampoka ilay fanadihadiana goavana. Iza no nanimba ny firenentsika?
Ny sioka etsy ambony dia manondro ny fanonona putonghua ny “Amazing China” hoe Li hai le, wo de guo. Midika ihany koa io hoe “Nanimba ny fireneko ianao.”
Noraràn'ny governemantan'i Etazonia tamin'ny herinandro ny orinasa amerikana  tsy hifampiraharaha ara-pihariana amin'ny ZTE Corp avy any Shina noho ny nanaovany fanambarana diso nandritra ny famotopotorana ny fifanarahana ara-pihariana ifanaovany amin'ny andry iraniana miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.
Maro amin'ny mpiseran'ny Weibo, sehatra media sosialy malaza indrindra any Shina, ihany koa no mahita ny ady ara-barotra ifanaovan'i Etazonia sy i Shina ary ny raharaha ZTE no fipoahana mavesatra nanimba ny endrik'i Shina ho firenena matanjaka.
Nilaza ny lahatsoratra Weibo iray malaza:
Tokony nanapotika ny alonalon'ny “Amazing China” ny fanasazian'i Etazonia an'i ZTE. Eny amin'ny ilany malemy eo amin'ny ady ara-barotra ifanaovany amin'i Etazonia i Shina ary ny famerana ny fanafarana vokatry ny fambolena ihany no hanerana ny mpifidy an'i Trump eo amin'ny sehatry ny fambolena. Saingy kely ny fiantraikany marina raha jerena amin'ny toekarenan'i Etazonia. Etsy andanin'izany, ampihimamban'i Etazonia ny satan'ny fananana teknolojia mandroso – mpampita (herinaratra), fitaovam-pandrehetana fanaporetana, ôptika (momba ny maso, haihazavana), ny fitsaboana (haiaina), fitaovana vaovao, fitaovana shimika, milina mandrefy marina tsy mivaona (précision). Izay rehetra fanasaziana amin'ny vokatr'ireo sehatra teknolojia ireo dia misy fiantraikany lalina dia lalina amin'ny indostiria shinoa.
Io tranga io indrindra no namoaka ny faharefoan'i Shina amin'ny maha-mpanavao teknolojia azy. Miankina dia miankina amin'ny fanafarana mpampita herinaratra hamokarana solosaina, finday, fiaramanidina, fiara ary zavatra maro hafa i Shina. Amin'izao fotoana izao, mankany Shina avokoa ny 60 isanjaton'ny potsin-tsolosaina [chip=puce]  voavarotra manerantany isa-taona.
Saingy milaza tantara hafa ny “Amazing China” (Shina Mahagaga). Nasehon'ny filma fa firenena nanafatra potsy i Shina taloha fa efa tonga amin'ny laharana sady anisan'ny mpanondrana potsy betsaka izy amin'izao fotoana izao. Milaza sompirana ihany koa ny filma fa mitarika eo amin'ny tontolon'ny teknolojian'ny mpampita (herinaratra) i Shina.
Araka ny efa voatsinjo mialoha, naneho hevitra tamin'ny fifangarihana teo amin'ny propagandin'ny filma sy ny tena zavamisy marina ny olona. Nilaza i Zhang Yujin mpisera Twitter:
Elaela mihitsy aho vao nahazo ny dikamitovin'ny “Amazing China,” filma propagandin'ny vanim-potoana vaovao. Fanatontosana goavana izay ahitanao an'i Shina ho firenena mpanondrana potsy izay manana ny taratasy fanamarinana famoronana potsy betsaka indrindra. Nanamontsana ny zavabita tsara indrindra manerantany izy, sns. Nikorontana tokoa ny saiko. Fa maninona moa ny ZTE no tsy nividy potsy tany amin'ny mpanatontosa (tale) ny filma?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/27/118427/
 Amazing China: https://en.wikipedia.org/wiki/Amazing_China
 “Amazing China”: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%89%E5%AE%B3%E4%BA%86%EF%BC%8C%E6%88%91%E7%9A%84%E5%9B%BD
 April 23, 2018: https://twitter.com/4jZIM2gyFOZADHO/status/988284242860892160?ref_src=twsrc%5Etfw
 ny orinasa amerikana: https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2018/04/16/u-s-companies-banned-from-selling-to-chinas-zte-telecom-maker/
 60 isanjaton'ny potsin-tsolosaina [chip=puce]: http://www.globaltimes.cn/content/1098415.shtml
 April 23, 2018: https://twitter.com/LFa35KxktB2WHOX/status/988294719506649088?ref_src=twsrc%5Etfw